10 Goobo Kiro Ah Oo Fasax Ah Oo Ku Yaal Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Goobo Kiro Ah Oo Fasax Ah Oo Ku Yaal Yurub
Asturnaanta, 5-tas-hiilaadka hudheelka xiddigga ah, views breathtaking, iyo goobta, xiga 10 dhibco ayaa wada helay. Kuwani 10 meelaha kirada fasaxa laga cabsado ee Yurub waxaa ku hareeraysan dabeecad qurux badan waxayna la yimaadaan faaiido cajiib ah.
1. Meel Kireysi Ah Oo Fasax Ah Oo Ku Yaal Faransiiska: Provence
Aqallada dhagxaanta, fillooyinkii hore ee Faransiiska, buuraha quruxda badan ee Dentelles de Montmirail, Provence waa mid ka mid ah 10 meelaha ugu badan ee kirada fasaxa ee Yurub.
marka hore, u soo kicinta urta lavender-ka iyo ka soo qaadashada cherry-ka geedaha waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee lagu sameeyo Provence. Marka labaad, inaad ka bogaadiso quruxda Mont Ventoux daaqadaha gurigaaga dalka ayaa ka badnaan doonta riyo kasta oo aad waligaa ku riyootay oo ah fasaxa ugu fiican.
Gudaha Provence, waxaad haysataa fursado badan oo hoy kiro ah oo kiro ah: Guryaha beeraha, villooyinka, iyo aqallo qurux badan. Dhammaan kirada fasaxyada ayaa si buuxda u qalabaysan si ay u martigeliyaan qoysaska carruurta leh, ama kooxo asxaab ah.
From $136 for a 2 aqalka jiifka ah si $350 guri villa ah, halkii habeen.
2. Meesha ugu Fiican ee Kireysiga ee Yurub Gudaha Talyaaniga: Tuscany
Dooxada khamriga ee Tuscan waa meel la yaab leh oo kiro ah oo Talyaani ah. Buuraha xariifka ah waa goob cajiib ah oo lagu nasto oo lagu nasto. Tusaale ahaan, jasiiradda xiisaha badan ee Giglio, ama kaniisadda Franciscan ee ku taal La Verna, waa waxqabadyo dib-u-dhac weyn oo ku yaal gobolka quruxda badan ee Tuscan.
Intaa waxaa dheer, subaxdii soo tooso, ka bixitaanka guriga beeraha ee dalka si aad u aragto muuqaalka quruxda badan ee Tuscany – waa qaali. halkan, waxaad ka dooran kartaa qaboojinta barkadda gaarka loo leeyahay galaas khamri ah, ama u baxa safar khamri.
Villas, guryaha, iyo aqallo.
$68 si ay u $200 halkii habeen.
Waxqabadyada Carruurta: Xaqiiqdii! Halka dadka waaweyni ay is koolkoobaan, caruurtu waxay leeyihiin qarax ka dhaca jardiinooyinka xayawaanka ee Pistoia ama Cavallino Matto beerta madaddaalada in Livorno.
3. Meesha ugu Fiican ee Ijaarka UK: Galbeedka England
Xeebaha cajiibka ah, aqallo dhagax ah, gabbaldhac qurux badan, iyo deganaan, ka dhig Koonfur Galbeed England meesha ugu habboon ee lagu kireysto fasaxyada miyiga Ingiriiska. Intaa waxaa dheer, ah magaalooyin xeebeed qurux badan ee Devon iyo Dorset waxay ilaalsadeen soo jiidashadooda sanadihii la soo dhaafay waxayna geesinimo ugu jireen gacmaha waqtiga iyo dabaylaha cusbada.
Ku socoshada xeebaha dahabiga ah, bogaadinaysa dhagaxyada Simon Old Harry, ama Xeebta Jurassic, garaacid magaaladu waa jabtaa wakhti kasta. Inta halkan joogta, waxaad dareemi doontaa inaad dib ugu soo laabaneyso waqtiga laga soo bilaabo waagii hore taariikhda 17th qarnigii. Muuqaalka leh wuxuu kuu sheegayaa sheekooyin waqtiga iyo habka dabiiciga ah ee qaybtan ka tirsan Ingiriiska, halka aqalada dhagxaanta ama dhaqameed dhaqameed ay kuu sheegi doonaan nolosha iyo dhaqanka Galbeedka England.
Sidaas, haddii aad xiisaynayso dhaqanka Ingiriiska, beero, naqshadaha, iyo sheekooyin – markaa waxaad ogaan doontaa in Galbeedka England ay leedahay qaar ka mid ah meelaha kirada ah ee fasaxa qaaradda Yurub.
$70- 320 halkii habeen
4. Meel Kireysi Ah Oo Fasax Ah Switzerland: Swiss Alps The
Iyadoo in ka badan 10,000 fursadaha hoy, ah Swiss Alps waa meel kiro ah oo fasax ah oo kiro ah oo ku yaal Yurub. The buuraha Swiss Alps kala duwan, waxay bixisaa aragtida ugu fiican, muuqaalka, wadooyin, muuqaal, guryaha kirada fasaxyada badan, taasi waxay kaa dhigi doontaa daankaaga inuu daadsho.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan kirada fasaxa ee Alps-ka Switzerland ayaa ah inuu jiro guri loogu talagalay dhadhan iyo koox kasta. Qoysaska, kooxo asxaab ah, oo leh tubbada kulul ee banaanka, chalets, buuraha ama aragtida dooxada - Alps-ka Switzerland aad bey u kala duwan yihiin oo waa meesha ugu fiican ee lagu kireysan karo qof walba.
Sidaas, hadda waa inaad kala doorataa meelaha ka baxsan-garaacista sida Lucerne, ama dooxada biyo-dhaca, harada Maggiore ama aragtida buuraha ee safarkaaga fasaxa aan la ilaawi karin abid.
Chalets, qolal alwaax ah, guryo, ama guryo.
From $92 guri loogu talagalay $265 halkii habeen oo loogu talagalay jajabka gaarka loo leeyahay ama guriga leh aragtida harada.
5. Meelo Kiro Ah Oo Fasax Ah Oo Ku Yaal Faransiiska
Faransiiska waa meel la yaab leh oo la kireysto fasaxa Yurub. Iyada oo leh meelo badan oo qurux badan oo dhinacyo badan leh, runtii way nagu adkaatay inaanu soo qaadano oo keliya hal meel oo kiro ah oo fasax ah oo loogu talagalay fasaxaaga soo socda ee Faransiiska.
Tusaale ahaan, Biarritz waxay leedahay xeebta ugu quruxda badan, halka dooxada Dordogne ay bixiso aragti yaab leh oo buur iyo webi leh.
Ama booska kirada fasaxa ah ee aad dooratid, kiradaada fasaxa cajiibka ah si buuxda ayaa loo qalabeyn doonaa, oo leh beero qurxoon, iyo gobolada ugu quruxda badan Faransiiska.
Gudaha Brittany, waxaad ka heli doontaa qalcado kirada fasaxyada ah, ama aqal leh raad gaar ah oo loo maro xeebta quruxda badan.
$75 – $145 halkii habeen
6. Meel Kireysi Ah Oo Fasax Ah Oo Ku Yaala Czech Republic: Bohemia
Bohemian Switzerland waa mid ka mid ah gobollada ugu caansan Yurub. Thanks to buuraha dhagaxa cajiibka ah iyo aragtida webiga Elbe, Czech Switzerland waa janno fasax ah. Sayidka, waa meel kiro ah oo fasax ah oo laga kireysto Yurub.
Meeshani waxay bixisaa aragtiyo muuqaal ah, jidad socod badan, qoyska baro tamashle, iyo webi lagu dabbaasho.
Guryaha casriga ah ee ugu dhow dabeecadda duurjoogta ah, iyo nolosha 100 milyan oo sano. Magaalada Decin waa meel qurux badan oo aad ka kireysato gurigaaga meel ka baxsan gurigaaga.
$90 – $150 halkii habeen
7. Meel Kireysi Ah Oo Fasax Ah Oo Ku Yaala Austria: Styria
Waxay ku taal koonfur-bari Austria, muuqaalka Alpine Styrian waa mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan Austria. Sidaa darteed, Styria waa meel kiro ah oo fasax ah oo ku yaal Yurub: aragtiyaha, barafka, daaqa cagaaran, iyo dabeecadda dabiiciga ah.
Marka lagu daro aragtiyaha cajiibka ah iyo waddooyinka socodka, Styria, gebi ahaanba waad nasan doontaa booqashada ka dib ilo kuleyl dabiici ah. Haddii kale, mahadsanid geedo badan oo tufaax ah iyo beero canab ah, madaxaagaad saari kartaa, ama ku raaxee jimicsi macaan.
qolal alwaax ah, villooyin leh barkado, chalets.
$65 – $200 halkii habeen
8. Meel Kireyn Fasax Ah: London
London waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee la kireysto fasaxa Yurub maxaa yeelay waa magaalo ikhtiyaarro aan dhammaad lahayn leh. Halkan waxaad ka heli doontaa xaafado u gaar ah oo qurux badan, oo leh qaab dhismeed kala duwan, dhaqanka, iyo gariir. Notting Hill waa riyo, Hampstead Heath waa dhaqan iyo ubax, iyo Kensington waa posh oo casri ah. Kuwani waa tusaalooyin yar oo ka mid ah meelaha cajiibka ah ee lagu xajisto kiradaada fasaxa ee soo socota ee ka baxsan guriga.
Waxaa intaa dheer, London waxay bixisaa aragtiyo aad u tiro badan, suuqyada, matxafyada, iyo jardiinooyin nooc kasta oo dhadhan iyo fasax ah. Sidaa darteed, London waxay guul buuxda u noqon doontaa a fasaxa qoyska ee Yurub oo ay la socdaan carruur: jardiinooyinka madadaalada, dukaamada keega ugu fiican, iyo Harry Potter dabcan.
Kirada guryaha ee bartamaha London, iyo guryaha ka baxsan London, depending on the zone.
9. Meel Kirayn Fasax Ah Oo Jarmal Ah: Bavaria
Bavaria waa mid kamid ah gobolada ugu bilicsan Jarmalka, gaar ahaan guga. Laga soo bilaabo Alps ilaa webiga Danube, music, iyo macmacaanka Bavaria, waxyaabo badan oo la sameeyo, a 10-safarka maalinta Bavaria waxaa laga yaabaa inaysan ku filnayn inaad ku raaxaysato wax kasta oo meeshan quruxda badan leh.
Sayidka, waa inaad horay usii qorsheysaa ciidaada Bavaria. Maaddaama Bavaria ay tahay mid ka mid ah meelaha fasaxa loogu tago Jarmalka, loogu talagalay dadka deegaanka iyo dalxiisayaasha, kirada fasaxa waxay u egtahay in lasii ballansanyahay dhawr bilood kahor. Intaas waxaa sii dheer boos celinta, si aad uga dhigto sida ugu fiican fasaxaaga Bavaria, cilmi baaris iyo sameyso liistada waxyaabaha ugu sarreeya iyo waxqabadyada ay tahay inaad sameyso, oo waxay leeyihiin safar guud.
Villas, guryaha, iyo guryo.
$80- $350 halkii habeen
10. Meel Kireysi Ah Oo Fasax Ah Oo Ku Yaala Dalka Talyaaniga: Lake Como
Lake Como waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee loo tago fasaxyada Talyaaniga. In kasta oo xaqiiqda ay jirto haddana waxay noqon kartaa mid aad u camiran xilliga xagaaga, harada quruxda badan iyo muuqaalka buuraha, jawiga deggan, harada Como dhex dhig 10 meelaha ugu badan ee kirada fasaxa ee Yurub.
Waqtiga ugu fiican ee fasaxa Lake Como waa inta udhaxeysa Maarso ilaa Nofeembar, markay tahay Luuliyo-Ogast waa bilaha ugu kulul uguna mashquulka badan. Sidaas, runtii waa muhiim inaad cilmi-baaristaada horay usameyso. Sidaa darteed, waxa ugu muhiimsan ayaa ah in la hubiyo hoyga iyo faa'iidooyinka iyo qasaaraha ka qabsashada kireysiga fasaxa ee harada, qayb ka mid ah sanadka.
Villas raaxo leh, guryaha, chalets, iyo aqallo.
$40 maalin kasta ilaa $500 usbuucii
halkan at Save A tareenka, waan ku farxi doonnaa inaan kaa caawino qorsheynta safarka 10 meelaha ugu badan ee kirada fasaxa ee Yurub. Safarka tareenka ee taga meesha loo socdo iyo guri ku riyooday meel ka baxsan guriga waa habka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan ee safarka.
Ma rabtaa inaad ku dhajiso bartayada blog-ka ah "1o Goobo Kiro Ah Oo Cajiib Ah Oo Yurub Ah" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Fvacation-rental-places-europe%2F- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)